Global Voices teny Malagasy » Lalàna vaovao momba ny fitsaboana any Hongria: mety hahatezitra ireo ho renim-pianakaviana nametraka drafitra momba ny fiterahana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2021 14:07 GMT 1	 · Mpanoratra Bianka Koka Nandika (fr) i Hélène Marpeau, avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Hongria, Fahasalamàna, Lalàna, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta
Lahatsoratra anglisy niandohana,  nivoaka tamin'ny 4 Febroary 2021.
Nolanian'ny Antenimiera hongroà tamin'ny Oktôbra 2020, voalazan’io lalàna vaovao io  [ang] ny fanondrotana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana amin'ny sehatry ny fahasalamàna, izay efa nandrasana ela. Misy fepetra vaovao ihany koa entiny ho an'ireo sady miasa amin'ny fanjakana no miasa koa amin'ny tsy miankina.
Omen'ilay lalàna vaovao sazy 5 hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina  [ang] ireo mpiasa manaiky handray vola na fanomezana avy amin'ny marary. Tsy natao handrisika io fomba fanao io ilay fanondrotana karama.
Any amin'ireo firenena eorôpeàna manana rafitra fitsaboana tantanin'ny fanjakàna, toa an'i Royaume-Uni  [ang], Pays-Bas  [ang] na i Soeda  [ang], tsy afaka manatona mpahay manokana ireo marary raha tsy misy taratasy avy amin'ny mpitsabo ankapobeny, saingy azon'ireo vehivavy mitondra vohoka atao ny manatona izay mpitsabo mampiteraka tiany hatonina.
Tao amin'ny Kossuth Radio, onjampeo iray akaikin'ny fitondràna, niaiky  [amin'ny fiteny hongroà, hu] ny minisitry ny fahasalamàna, Miklós Kásler, hoe « mila fepetra voazava tsara amin'ny antsipirihany ny fanasarahana ny tontolon'ny sehatra ara-panjakana sy ny tsy miankina ». Nanome toky ihany koa izy ho an'ireo mpihaino fa ny ministera dia niaraka niasa akaiky tamin'ny Tranoben'ny Fahasalamàna ao Hongria ary ireo sendikàn'ny sehatry ny fahasalamàna.
Io Tranobe io anefa no nilaza fa manohitra ny fametrahana sivana, tamin'ny fanamafisana  [hu] hoe mety ho tsy fahatomombanana hanome vahana ny fitohizan'ireo fomba fanao manome fanomezana izany. Miara-dàlana amin'izay, nanamafy ireo sendikan'ny sehatry ny fahasalamàna, tao anaty fampitam-baovao  iray [ang] fa mety « tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana » ilay lalàna noho izy mety hametra ny fahalalàna hiasa.
Noho ny tsy fisian'ny mangarahara eo amin'ny lafiny lalàna, nisy hopitaly iray niezaka nanentsina ny banga tamin'ny famoahana ireo torolàlana avy aminy manokana  [hu], nandrarà ireo reny mitondra vohoka tsy hiteraka arahan'ireo mpitsabo mpampiteraka nosafidiany, mandritra ny fotoana tetezamita mitatra hatramin'ny 1 Martsa.
Fifanjevoana sy hasosorana no nandraisan'ireo marary ilay fanapahankevitry ny hopitaly, dia ireo marary izay nitaky  [hu] ny hisintonana ireny fepetra vaovao ireny.
Ho setrin'ireo taridàlana navoakan'ilay hopitaly, namoaka fanambaràna iray ny ministera misahana ny seraseram-bahoaka, ka tao anatin'izany no nilazàny fa « tsy azo ekena ny fampiasàna ny ady amin'ny kolikoly ho antony anaovana sakana amin'ny fahalalahana hanan-tsafidy »  [hu]. Fa mahatsikaiky, ireo fepetra natsofoky ny mpahay lalàna ho ao anatin'ilay lalàna vaovao dia mety hitondra vokany mitovy ihany.
Tao anaty taratasy iray  [hu ; pdf] tamin'ny 21 Janoary nalefa ho an'i Zoltán Jenei, talen'ireo hopitalim-panjakana, ny Tranoben'ny Fahasalamàna ao Hongria dia nanangana lisitra misy ireo fitakiana avy amin'ireo matianin'ny fahasalamàna. Hita anatin'izy ireny ireo fangatahana fampahafantarana misimisy kokoa momba ireo fepetra azo ampiharina amin'ny ora ambony ampanga aloa vola sy ireo fangatahana andro tsy iasàna, ary hatramin'ny fomba fahazoana alàlana hiasa ivelan'ny rafitry ny fitsaboana ambany fiahian'ny fanjakàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/28/151656/
 Lahatsoratra anglisy niandohana,: https://globalvoices.org/2021/02/04/hungarys-new-health-care-law-could-upset-expectant-mothers-birth-plans/
 io lalàna vaovao io: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-healthcare/hungary-pm-agrees-on-big-wage-hike-for-doctors-as-covid-19-cases-rise-idINKBN26O0P5
 tamin'ny fanamafisana: https://mok.hu/hirek/mokhirek/most-akkor-mi-van-az-egeszsegugyi-szolgalati-jogviszonyrol-szolo-torvennyel
 Agnes Ruzsovics : https://www.linkedin.com/in/%C3%A1gnes-judit-ruzsovics-md-phd-jd-998538a9/
 nisy hopitaly iray niezaka nanentsina ny banga tamin'ny famoahana ireo torolàlana avy aminy manokana: https://www.facebook.com/noiklinika/posts/468981761172892
 « tsy azo ekena ny fampiasàna ny ady amin'ny kolikoly ho antony anaovana sakana amin'ny fahalalahana hanan-tsafidy »: https://hvg.hu/itthon/20210109_Nem_korlatozhato_a_szabad_orvosvalasztas_alapjoga__allitja_az_EMMI
 taratasy iray: https://mok.hu/public/media/source/Transzparencia/Allasfoglalasok/Jenei_Zolt%C3%A1n_Eszjtv_k%C3%A9rd%C3%A9sek.pdf?fbclid=IwAR3F4OjI2K03pONqvZ2aPI6n6GnCDi_eSN-4DrPSwmPeyJHVPh0tWr0Hckk